Filmaata Biyyoolessaa Itophiyaarratti Ibsa ABO | QEERROO
Posted on March 9, 2021 by Qeerroo
1. Filmaata haqaa fi bilisaa geggeessuu haa turuutii
haalli amma biyyittiin keessa jirtu sadarkaa
dhumaattiillee mirgi dimokraasii (lowest
standards of even illiberal democracies) akkan
hin jirree dha.
2. Haala waggoota lama darban keessatti ta’e
walakkaa isaa armaan olitti caqafame irraan kan
ka’e, itti bahumsi filmaata kanaa filmaata haqaa,
bilisaa fi kan hunda bakka bu’u ta’uu waan hin
dandeenyeef qaamota dubbiin ilaaluu
(stakeholders) biratti fudhatama hin qabu.
3. Yoo filmaatni kun geggeeffamellee rakkina
siyaasaa gurguddoo ta’an fi waldhibdee biyyattii
keessa jiru furuu irratti jijjirama inni fidu hin jiru.
1. Hidhamtoota siyaasaa hunda haal duree tokko
2. Waajjiroota jaarmota mormitoota Siyaasaa yeroo
ammaa cufamanii/ tohannoo human sekuriitii
warra biyya bulchaa jiranii jiran banuu;
3. Yeroo ammaa biyyattii guutuu keessaatti
adeemaa kan jiru ummata hidhuu, dararuu fi
ajjeessuu dhaabuu fi marii hunda ammate
4. Qaamotni (Institutions) kan akka Boordii
Filannoo, Mana Seeraa fi Murtii fi nagaa eegdota
akka bilisa ta’an wabii kennuu;
5. Marii Siyaasaa (political Dialogue) kan hunda
ammatee fi itti bahi isaa furmaata rakkina
polotikaa biyya kanaa kan tahe akka jalqabamu